Aoka hitombo ara-panahy isika
"Mananatra anareo ihany izahay ry rahalahy, mba hitombo bebe kokoa." -1 Tes. 4:10.
Ny asa ara-panahy izay ankinin'ny Tompo amin'ny tanora sy amin'ny olona rehetra dia maneho ny fanajan'Andriamanitra azy ireo amin'ny maha-zanany azy. Antsoiny izy ireo mba hiara-manatontosa Aminy ny asa famonjem-panahy sy fanandratana ny hafa. Toy ny ray mandray ny zanany mba hiara-miasa aminy eo amin 'ny raharahany dia toy izany no andraisan'Andriamanitra antsika ho mpiara-miasa aminy.
Ny tanora lahy sy vavy dia mila misimisy kokoa ny fahasoavan'i Kristy mba hahafahan'izy ireo maneho ny foto-kevitry ny fivavahana kristianina eo amin'ny fiainany andavanandro. Ny fiomanana ho amin'ny fiavian'i Kristy dia tontosaina amin'ny alalan'i Kristy mba ho fanazarana ny toetra tsara indrindra ananantsika (...) Kanefa ilaina tokoa ny mitoetra akaikin'i Jesôsy. Izy no hery sy fahombiazana ho antsika. Tsy afaka miantehitra amin'ny tenantsika isika na dia fotoana kely monja aza.
Ry tanora lahy sy vavy, ampiasao amim-pahatokiana ny fahaiza-manao-nareo, zarao malalaka ny fahazavana omen'Andriamanitra anareo. lanaro ny fomba tsara indrindra hanomezana ho an'ny hafa ny fiadanana, ny fahazavana, ny fahamarinana sy ny haren'ny fitahiana maro avy amin'ny lanitra. Mitomboa mandrakariva. Manatrara mandrakariva ny ambony kokoa hatrany. Ny fahafahana mampitombo ny herin'ny saina sy ny vatana, eo am-pibanjinana ny mandrakizay, no manan-danja ankehitriny (...) Mitozoa eo amin'ny asa izay efa natombokareo, ambara-pahazoanareo ny fandresena mifanesisesy. Beazo ny tenanareo hanana tanjona. Banjino tsy tapaka ny fenitra ambony indrindra mba hahavitanareo asa tsara kokoa hatrany, ka amin'izany dia haneho ny voninahitr'Andriamanitra ianareo. — YI, 25 Janoary 1910